One of my brother wrote: အာဏာသိမ်းပြီးတော့ ထွန်းကြည်ပြောခဲ့တာက ”ယုန်ကို မုန်လာဥဂိုဒေါင်စောင့်ခိုင်းရင် စားမှာပဲ” တဲ့။
သူ့ကိုယ်သူ တိရစ္ဆာန်နဲ့ နှိုင်းသွားတာလေ။ သူ့ကို မေးခြင်တာက အိမ်မှာ အမေ ယောက္ခမ မိန်းမ သမီး ချွေးမ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတွေရှိနေတော့ရော ဒီလိုပဲလားလို့။
ဒီလို တိရစ္ဆာန်ကိုရွေးရင် ရွေးတဲ့သူ တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်မှာပါ။
This entry was posted on April 16, 2015 at 8:26 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.